Javier Zanetti oo SHAN xul u saadaaliyay in midkood uu ku guuleysan doono koobka aduunka ee 2018 – Gool FM
(Argantina) 28 Maajo 2018. Halyayga xulka qaranka Argantina iyo kooxda Inter Milan Javier Zanetti ayaa u sharaxay in midkood uu ku guuleysan doono koobka aduunka 2018 ka dhici doono bisha soo aadan dalka Russia.
Sidoo kale Javier Zanetti ayaa wuxuu ka hadlay suurtagalnimada uu sanada 2018 ugu guuleysan karo koobka aduunka xulkiisa qaranka ee Argantian, isagoo intaas sii raaciyay sababta uu Mauro Icardi looga reebay xulka ay tahay arin qaas ah, marka loo fiiriyo bandhigii cajiibka ahaa uu ka sameeyay xili ciyaareedkan kooxda Inter Milan.
Zanetti ayaa ka hadlay ugu horeyn: “Aniga ahaan musharaxiinta ku guuleysan karta koobka aduunka ayaa kala ah Spain iyo Germany, sidoo kale Brazil, xili qalbigeyga uu ii sheegayo Argantina, iyo Belgium oo la filan karo in ay sameeyaan layaab”.
“Waxaan ku kalsoonahay ciyaartoyda reer Argentina ee Koobka Aduunka marwalba waa ku tiirsan, qalbigeyga wuxuu ii sheegayaa in tartankan aan meel fiican ka gaari doono”.
“Mauro Icardi wuxuu sameeyay wax walba xili ciyaareedkan si uu qeyb kaga noqdo koobka aduunka 2018, wuxuu muujiyay inuu yahay weeraryahan aad u wanaagsan, laakiin Sampaoli ayaa sidoo kale leh go’aan kale, laakiin muhiimada ayaa ah inaan ka fikirno dadnta xulka Argantina”.
Warqad Dacwad ah oo laga gudbiyay Sergio Ramos kaddib dhaawicii uu u geystay Maxamed Saalax iyo 300,000 oo....!!!